Akụkọ - Otu esi ahọrọ igwe nkenke ntụtụ dị mma nke ukwuu
Etu ị ga - esi họrọ igwe dị ukwuu na - akpụzi ịkpụzi
N'ihi na ịkpụzi ọgwụ na-akpụzi igwe bụ ngwaọrụ nke na-agbanye plastik thermosetting n'ime ebu nke ụdị dị iche iche iji ghọta ịkpụzi nke ngwaahịa plastik. Nnukwu igwe na-akpụzi ọgwụ na-ejikarị ndị na-ekpo ọkụ electromagnetic eme ihe iji nweta mmetụta nchekwa nchekwa, yana n'ihe oriri na ike ịchekwa, a na-ahọrọ onye ntụgharị ugboro ugboro iji gbanwee ugboro ole ọrụ akụrụngwa. Nke a ga-eme ka ntụkwasị obi ka mma ma nweta ntụkwasị obi ka ukwuu performancerụ ọrụ dị mma, yabụ anyị kwesịrị ịhọrọ nhọrọ ka mma dabere n'ọnọdụ ahụ n'ezie, na ntụkwasị obi ga-akawanye mma.
N'ezie, a na-echekwa ihe nchekwa maka ike ịkpụzi igwe na oke mma dị mma n'ihe gbasara kpo oku na ike. Ya mere, ọ dị mkpa ịhọrọ nhọrọ ka mma dịka ọnọdụ siri dị. Nkwenye dị mma emere ga-enwe arụmọrụ pụtara ìhè, yabụ enwere ike nweta ya. Elitụkwasị obi ga-aka mma nke ukwuu. Họrọ ịmara na igwe ọkụ eletrik nwere ike ịchekwa oge kpo oku, na-arụ ọrụ na ọkpọkọ kpo oku, na akwa mkpuchi mkpuchi pụrụ iche nwere ike melite arụmọrụ kpo oku, ebe arụmọrụ kpo oku dị elu, wdg, nke bụ ihe kpatara iji hụ na nchekwa ọkụ. N'oge gara aga, ihe mgbochi ikpo ọkụ na-eguzogide nwere obere arụmọrụ na nnukwu ọkụ ọkụ, n'ihi ya ha na-ewe ọkụ eletrik. Ya mere, ọnụ ahịa nke ịhazi ngwaahịa plastik abawanyewo nke ukwuu.
Anyị na-ahọrọ ezigbo ịkpụzi ọgwụ na-akpụnye igwe iji nweta ezigbo mmetụta nchekwa. Anyị kwuru banyere ike nchekwa nke akụkụ kpo oku dị n'elu. Ugbu a, anyị na-ekwukarị gbasara nchekwa nchekwa gbasara ike. Ọ bụrụ na akụrụngwa chọrọ naanị 30HZ ike n'oge ọrụ, yana ezigbo ike nke moto ahụ nwere ike ịdị elu, ọ ga-eme ka ike gwụ. Mgbe ahụ họrọ onye ntụgharị ugboro ugboro maka mgbanwe iji hụ ole akụrụngwa chọrọ. Mmepụta ike na-adabere n'otú ike si arụ ọrụ, ya mere mmetụta nchekwa ike enwere ike ị nweta ga-abụ nke ọma, yabụ ntụkwasị obi a rụpụtara ga-aka mma.
Nkenke Plastic Ọgwụ na ịkpụzi, Mkpa Wall Ọgwụ na ịkpụzi igwe, Nkenke Ọgwụ na ịkpụzi, Nkenke Ọgwụ na ịkpụzi Inc., Nkenke Ọgwụ, Nkedo nkenke,